Su'aalaha Bisha Ramadaan
Author Topic: Su'aalaha Bisha Ramadaan (Read 76356 times)
Re: Su'aasha 20:
« Reply #45 on: August 20, 2011, 07:35:00 AM »
ummada waliba marka ay ka leexdaan wada alle, illaah waxuu u soo diraa rasuul kaasi oo afkooda ku hadla oo umada u sheega xaqqa iyo in illaah laga baqa, ilaahna uu mid kaliya yahay waxii ka soo harayna ay khalqi illaah yihiin.
Arrintaas marka ay rusasha la imadaan waxaa ay dadka gaalada ah ee wadada alle ka bayray isku dayaan in rasuulka waxa uu wata beeniyaan oo ay wax walbo oo ay isku hir istaagi karaan in risaaladiisa gudan samaynaan. ayada xaalada qaar xataa ay gaarta in dil loo maleega rusasha.
Haddaba waxaad sheegtaa rasuulkii qoomkiisa ay dabka (naar) u shideen ay ku tuureen si uu ugubta, lakiin illaah asoo nabad qaba ka soo saaray.
Re: Su'aalaha Bisha Ramadaan
« Reply #46 on: August 20, 2011, 11:16:58 AM »
Nabiga ay qoomkiisu isku dayeen inay gubaan waa; nabi Ibrahim (cs)
Re: jawaabta 20:
« Reply #47 on: August 20, 2011, 08:52:50 PM »
Siciido waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee su`aasha jawaabta uga bixasay.
jawaabta waa sax.
Re: Su'aasha 21:
« Reply #48 on: August 21, 2011, 06:12:04 AM »
sida aan ognahay adoomada alle waxaa ku nimcaysatay nimcooyin badan, BINAADANKA alle waxuu uu siiyay fikar iyo nimcada hadalka oo ay ooga duwan yihiin khalaa`iqda kala sida xaywaanada.
Qur`aanka waxaa ku arooray laba xaywaan oo hadlay sida bin aadanka oo kale.
Haddaba waxaad sheegta magacyada labadaas xaywaan iyo meesha ay qur`aanka kaga soo arooren.
Re: jawaanta 21:
« Reply #49 on: August 21, 2011, 08:26:26 PM »
lada xaywaan ee hadla waa :
1.quraanjada ama af carabiga loo yaqaana (namli).
2. Shimbirka hudhud loo yaqaana af caribiga.
waxa ku soo arooreen suuratu AL-NAMLI aayadaha 18 ilaa 24
« Reply #50 on: August 22, 2011, 06:54:35 AM »
carabta jaziirada carabta dega waqtigii hore waxay la hayeen dhaqama badan oo ka mid ahayaeen.
in wiilka haddii u dhashay dadka magaalooyinka dagan, ay uu diraan haweenay nuujisa oo baadiyaha degan si wiilkaas uu u barta ad-adeegay iyo afka saxda ah, ayadoo haweenaydaas nuujinaysan la siinaya maal ay ku xanaanaysa wiilkaas si ujra ahaan.
Hadaba waxaad sheegta haweenaydi nuujisay nabiga (nabad galiya iyo naxariis korkiisa ha ahaate)?
Re: jawaabta 22:
« Reply #51 on: August 22, 2011, 08:24:35 PM »
haweenayda nuujisa nabiga ( nabad galiya iyo naxariis korkiis ha ahaatee) waa :
Re: Su'aasha 23:
« Reply #52 on: August 23, 2011, 05:51:30 AM »
waxaad sheegta saxabigii (rc) loo yaqaanay sir-hayihii nabiga (nabad galiyo iyo naxariis korkisa ha ahaate)
saaxibu siri rasuulilaah.
Re: jawaabta 23:
« Reply #53 on: August 23, 2011, 08:23:00 PM »
saxaabiga loo yaqaana sir-hayihi nabiga (scws) waa:
xudeyfa bin al-yaman
Re: Su'aasha 24:
« Reply #54 on: August 24, 2011, 06:33:44 AM »
waxaad sheegtaa 4 bil ee loo yaqaana bilaha xurmada ( ash-hurul xurum).
Re: JAWAABTA 24:
« Reply #55 on: August 24, 2011, 08:37:48 PM »
bilaha a 4 oo loo yaqaana bilaha xurmada (ash-hurul xurum) waa :
cariga waa sidaan :
afka soomaliga waa luga kala duwan yahay bilaha magayadooda ani sidaan ayaaan u aqaanaa:
Re: Su'aasha 25:
« Reply #56 on: August 25, 2011, 11:38:22 AM »
waxaad sheegtaa saxaabiga loo yaqaana gabyaagii nabagiga (scws) -shaaciru rasuulilaahi.
Re: Jawaabta 25:
« Reply #57 on: August 25, 2011, 08:22:12 PM »
saxaabiga loo yaqaana gabyaagii nabiga (scws) waa:
xasaan bin thabit (rc)
Re: su`aasha 26:
« Reply #58 on: August 26, 2011, 06:40:51 AM »
waxaad sheegta magaca nabi nabiyada ka mid ah oo ilaah uu siiyay nabinimo iyo boqortooya wada socata.
Re: jawaabta 26:
« Reply #59 on: August 26, 2011, 08:15:26 PM »
nabiga nabinimo iyo boqortooya wada socata waa :
nabi sulaymaan ( calayhi salaam).
Views: 12920 March 24, 2013, 08:27:09 PM
Remaining Steadfast After Ramadaan.
Started by SumayyaBoard Islam and Medicine
Views: 4181 October 17, 2007, 06:55:34 PM
RAMADAAN KARIIN TO ALL MUSLIMS WHERE EVER YOU ARE
Started by Dr.HabiibBoard Feel Free Here
Views: 11512 July 01, 2014, 01:35:10 AM
Views: 6384 September 14, 2007, 05:03:59 AM
Started by Dr.GacalBoard New Members
Views: 3619 September 01, 2008, 02:46:49 PM